बलिउडकी बोल्ड अभिनेत्री कंगना रनौत प्राय कुनै न कुनै कुराको चर्चामा रहन्छिन्। कहिले बोली बयान को कारण भने कहिले कानूनी मामिला को कारण, कंगना अक्सर चर्चामा आउछिन ।
सोमवार, मंसिर ६, २०७८ १०:२२
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। बलिउडकी बोल्ड अभिनेत्री कंगना रनौत प्राय कुनै न कुनै कुराको चर्चामा रहन्छिन्। कहिले बोली बयान को कारण भने कहिले कानूनी मामिला को कारण, कंगना अक्सर चर्चामा आउछिन । हालै मात्र, कंगनाले आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राम खाता मा केहि बोल्ड तस्वीरहरु साझा गरिन जुन सोशल मिडिया मा धेरै छिटो भाइरल हुन थाल्यो। यी तस्वीरहरु देखे पछि, धेरै प्रयोगकर्ताहरु उनको प्रशंसा गरे र धेरै मानिसहरु उनलाई ट्रोल गरे। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
कंगना रनौतले ट्रोलर्सलाई जवाफ दिइन यस्तो जवाफ
प्रयोगकर्ताहरु भन्छन् कि कंगना प्राय अरुलाई लुगा लगाउन सल्लाह दिन्छिन् तर अहिले आफैले एक ब्रलेट मा पोज दिइरहेकी छिन्। अब कंगना आफैं मा यी कुराको को बारे मा चुप कहाँ बस्छिन र यस्तो अवस्थामा उनले इन्स्टाग्राममा एउटा स्टोरी पोस्ट गरेर ट्रोलर्सलाई जवाफ दिएकी छन्। कंगनाले लेखेकी छन्, ‘मलाई सनातन धर्मको बारेमा ज्ञान दिनेहरुलाई भन्नुहोस् कि उनीहरु अब्राहमिक देखिन्छन्’। अब उनको यो पोस्ट मा धेरै प्रतिक्रिया छ।
एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘विदेश जाने बित्तिकै संस्कृति बिर्सनुभयो? देशमा त दीदीले धर्म, सभ्यता र रीतिरिवाज को ज्ञान सिकाउछिन् । एकले लेखे – तपाइँ अरुको कपडा लाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाइँ आफैंले के लगाउ भयो ?
वर्कफ्रन्टको कुरा गर्दा कंगना फिल्म धकडमा एजेन्ट अग्नि को भूमिका निभाउनेछिन्। यस बाहेक उनी फिल्म ‘तेजस’ मा पनि देखिने छिन्। साथै, उनको फिल्म ‘थलाइवी’ चाँडै रिलीज हुँदैछ। उनी यस फिल्ममा जयललिताको भूमिकामा देखिनेछिन्।